Alaab -qeybiyeyaasha Macmacaanka iyo Warshadda | Soo -saarayaasha Macmacaanka Shiinaha
Sucralose waa macmacaan macmal ah oo lagu beddelay sonkor-kalori aan eber lahayn. Midowga Yurub, waxaa sidoo kale lagu yaqaan lambarka E (koodhka lagu daro) E955. Sucralose waxay qiyaastii 600 jeer u macaan tahay sukrose (sonkorta miiska), laba jeer ayay u macaan tahay saccharin, iyo 3.3 jeer ayay u macaan tahay aspartame. Si ka duwan sida aspartame, waxay ku xasilloon tahay kulaylka iyo in ka badan xaalado pH oo badan waxaana loo adeegsan karaa dubista ama alaabada u baahan nolol shelf dheer. Guusha ganacsi ee alaabada ku saleysan sucralose ste ...